Imininingwane yokuqala yochungechunge lwe-Resident Evil ihlungiwe ku-Netflix | Izindaba zamagajethi
UPaco L Gutierrez | | Ama-movie nochungechunge, General, Imidlalo yevidiyo
Ekuqaleni kuka-2019, umagazini odumile online Umnqamulajuqu Ngiyakudalula lokho INetflix ibisebenza ochungechungeni lwe-Resident Evil, isaga esethusayo somdlalo wevidiyo omkhulu uCapcom. Ingenye yama-franchise adume kakhulu futhi athelayo emhlabeni wemidlalo yevidiyo, idalwe ngo-1996 ngomdlalo wayo wokuqala wevidiyo weSony Playstation yokuqala, uthengise amakhophi ayizigidi ezingama-90 kuwo wonke amapulatifomu kuze kube manje.
INetflix okwamanje ayikaze yenze noma yiluphi uhlobo lwesitatimende esisemthethweni, kepha amazwibela ochungechunge akhishwe "ngengozi", ngakho-ke kuyaqinisekiswa ukuthi okuqukethwe kukhona futhi singakubona emasontweni noma ezinsukwini ezimbalwa, yilokho okuvame ukwenzeka kulezi zimo. Asibona abambalwa abebelindele lezi zindaba njengamanzi kaMeyi ngemuva kokuzijabulisa kodwa ngasikhathi sinye uchungechunge olwesabekayo lwamafilimu nguPaul WS Anderson, sinethemba ikakhulukazi uma sibheka esesikubonile muva nje ngochungechunge lomthakathi 'Umthakathi'.
1 Amazwibela avuza nge-Netflix
1.1 Imininingwane kanye nosuku lokukhishwa:
1.2 Uchungechunge olukhanseliwe lwe-Resident Evil lutholakale ku-2017
Amazwibela avuza nge-Netflix
Amazwibela wokuqukethwe itholwe nguJawmuncher umsebenzisi wesithangami Setha kabusha, kumxhumanisi weNetflix. Isevisi iphendule ngokususa okuqukethwe ngokushesha lapho kuvela ukuvuza. Ngokusobala ukulandisa kuzozama ukuzivumelanisa nezehlakalo ezenzeka ezindabeni zemidlalo yevidiyo; ama-protagonists azophatha ukuthola Ngabe inhlangano yezemithi ye-Umbrella ifinyelela kuphi?, eyenziwe ngegciwane i-T (Virus Tirant).
“Idolobha laseCelarfield, MD (eMaryland), libe isikhathi eside lingaphansi komthunzi wezidlakela ezintathu ezibonakala zingahlobene: i-Umbrella Corporation, isibhedlela esihlakazekile seGreenwood Psychiatric kanye nedolobha laseWashington DC. Manje, eminyakeni engamashumi amabili nesithupha ngemuva kokutholakala kweT T Virus, izimfihlo ezifihlwe yilawo maqembu amathathu zizoqala ukudalulwa kanye nezimpawu zokuqala zokuqubuka.
Isifinyezo esivutshiwe sihambisana ngokuphelele nolwazi olubikwe ngumxhumanisi woMnqamulajuqu. Isikhulumi esivele sishiwo kusengaphambili ukuthi INetflix ihlose ukuphenya izinqubo zangaphakathi zebhizinisi le-UmbrellaFuthi kwenzeka kanjani ukuthi ngaphandle kokusabalalisa igciwane elibulala idolobha lonke, laqhubeka nokuthola amandla. Ngaphandle kwalokho kuyaziwa ukuthi inkampani yokukhiqiza iConstantin Film iyabandakanyeka ekukhiqizeni uchungechunge Ithelevishini njengamanje, ngakho-ke yonke into iyanela uma siyengeza eqinisweni lokuthi sisho kulo mbhalo.
Imininingwane kanye nosuku lokukhishwa:
Okwamanje alukho ulwazi mayelana nosuku lokuqala kwalo ukukhishwa, ngoba ukuvuza yize bekuvela kuNetflix uqobo bekungafaki izinsuku. Konke kukhombisa ukuthi uchungechunge luzokwethulwa kulo nyaka we-2020, kusizakale ukudonsa okuzonikezwa ngumdlalo olandelayo wevidiyo kule saga. Ububi Bokuhlalwa 3 Ukuqothuka izokhishwa ngo-Ephreli 3 futhi kungaba yisipikha esimangazayo kulolu chungechunge uqobo nakwiNetflix, nalokhu okungenza abalandeli abaningi be-saga bakhokhele insizakalo ukuze babone i-series.
Uchungechunge olukhanseliwe lwe-Resident Evil lutholakale ku-2017
Kukho konke lokhu kufanele kwaziwe ukuthi bekuvele kunemizamo edlule yokwenza uchungechunge lwalesi saga, uchungechunge lwe-Resident Evil TV olukhanseliwe. Umqondisi ozimele uShawn Lebert neMance Media bamemezele eminyakeni embalwa edlule ukuthi bayasebenza kulokhu iphrojekthi ebizwa nge-Arklay, igama lezintaba lapho isithabathaba somuzi sikhona lapho kwenzeka khona umdlalo womdlalo wokuqala we-franchise.
Indaba yalandela umseshi ogama lakhe linguJames Reinhardt owayephenye ukubulawa kwabantu abaningi eRaccoon City; Noma kunjalo, isifundo asizange siqhubeke nomsebenzi. Ebufakazini obudaluliwe bomqondo, zonke izinkomba ze-franchise esabekayo zisusiwe kuvidiyo, kepha isabonisa isimo esifanayo esishubile kusuka ku-saga. Kuyihlazo ukuthi kungani, isahluko somshayeli sikhombe izindlela, yize kuliqiniso lokho Kwakungewona umkhiqizo omkhulu wesabelomali.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » Imininingwane yokuqala yochungechunge lweNetflix Resident Evil idaluliwe
I-Samsung Galaxy Buds +, izici ezihlukile zebhodlela